Fartaag oo shegay xiliga Baardheere gacanta ay ku dhigi doonaan |
Fartaag oo shegay xiliga Baardheere gacanta ay ku dhigi doonaan
Waxaa wali xiisado dagaal ay ka taagan yihiin gobolka Gedo halkaasoo ay dhaq dhaqaaqyo milateri ka wadaan ciidamo ka tirsan kuwa Amisom gaar ahaan Itoobiyaanka iyo waliba ciidamo Soomaali ah kuwaasoo iyana ka tirsan maamulka Jubba.
Ciidamada Soomaalida ayaa iminka fariisimo ka dhigtay duleedka Ceelwaaq halka kuwa Itoobiyaanka ah ay ka soo qul qulmayaan dhanka Doolow waxaana ay ku wada wajahan yihiin magaalada Baardheere halkaasoo ah Degmada Kaliya ee Alshabaab ka heysto Gobolka Geddo.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Jubba Jen.Fartaag ayaa ka dhawaajiyay waqtiga sida rasmiga ah ay ciidamadaani isbaheysanaya la wareegi doonaan Magaalada Baardheere ayna ka saari doonaan xoogaga Alshabaab oo bishaan Ramadaan dagaalo ka wada inta badan gobolada dalka iyo caasimada, order tadalafil, order Zoloft.
“16-ka Bishaan ayay ciidamadu Baardheere gaari doonaan waxayna ka saari doonaan kooxda alshabaab”ayuu yiri jen Fartaag
Jen.C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag wuxuu dhawaan ka yimid Dalka Itoobiya halkaasoo uu markii horaba u tagay inay Dowlada Itoobiya kaga helaan garab Milateri si ay Baardheere uga saaraan Alshabaab.
Itoobiyaanka oo u muuqda inay aqbaleen dalabka Maamulka Jubba ayaa maalmihii ugu danbeysay waxay Gedo ku soo gurayeen ciidamo dheereed ah si ay alshabaab uga saaraan Baardheere.